Cayaartoyda Qaranka Soomaaliyeed ee Taekwondow-ga oo Guul kasoo Hooyey Ciyaaraha 45th Dutch Open Taekwondo Championships 2018 %
Tantanka cayaaraha Taekwondow-ga aduunka ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Eindhoven ee dalka Holland bishan March 2018. Ciyaarahaan oo ahaa isreereebka tartamada olymbikada aduunka 2020-ka, waxaana Somaliya ugaaga qeyb galay ciyaartoyda junior-ka xulka qaranka Soomaaliyeed.
Cayaaryahanada mataleysay xulka qaranka Somaliyeed oo aheyd gabadha lagu magacaabo Ilhan Ismail (SOM-1509) oo ku cayaarta culeyska +68KG ayaa waxay ku guuleysatay kaalinta afaraad. Waxaa gabadhan Soomaliyeed ee da’da yar waxay muujisay ciyaar hufan oo dadweynihii ka soo qeybgalay ay aaad uguugu farxeen ayna kasbatay taageeroyaal tiro bada.
Waxaa halkaas ku wehlinaayey macalinka Xulka Qaranka ee Taekwondow-ga Soomaaliyeed Sir Mark Sargeant (SOM-1505) iyo tababaraheeda Hudda Ahmed (SOM-1504) oo ahaa macalimad aad u qibrad badan ciyaaraha Taekwondow-ga.
Waxaa kaloo haatan ay ciyaartoyda xulka qaranka Soomaaliyeed ee Taekwondow-ga ay diyaar garow fiican uguugu jiraan ciyaaraha tartamada qaarada Africa oo bisha 13 April 2018 ka dhici doono magaalada Hammamet ee dalka Tunisia. Waxaa ciyaartaas ugaaga qeyb galaya Xulka qaranka soomalia 4 ciyaartooy oo kala ah Abdulahi Dahir (SOM-1510) -68KG, Munirah Abdulwahid (SOM1508) – 59KG, Ilhan Ismail (SOM-1509) +68KG iyo Najma Dahir (SOM-1511) +47KG. Iyagoo sidoo kale cayaarta xigta ay ka dhici doonto Magaalada Buenos Aires ee dalak Argentiina bisha October 2018 ayna kaga qeyb gali doonaan isla cayaartooydaas kor ku xusan.
Xiriirka Soomaaliyeed ee Taekwondow-ga (XTS) ayaa dadaal dheeraad ah uguugu jira siduu usoo saari lahaa ciyaartooy tayo leh mathali karana xulka qaranka Soomaaliyeed ee Taekwondow-ga. Gudoomiye ku xigeenka XTS ahna madaxa xiriirada caalamiga Eng. Ahmed Issa Kirish ayaa waxuu inoo sheegay in cayaartoydan ay u diyaarinayaan ciyaaraha Olombikada Aduunka 2020 oo lagu qaban doono magaalada Tokyo ee dalka Japan. Taas oo loobaahan yahay inay haatan ka qeybgalaan tartamo badan si ay dhibcooyin ugu sii kororsan lahaayeen. Sidoo kale Gudoomiye ku xigeenka XTS – Eng. Kirish waxuu Mahad balaaran usoo jeediyey Gudiga Olombikada Soomaaliyeed (GOS) oo marwalba u heelan siduu u taageri lahaa Xiriirka Taekwondow-ga Soomaliyeed siduu u gaari lahaa horumar la taaban karo isla markaana ay usoo saari lahaayeen cayaartooy tayo leh oo kaga qeyb gala tartamada cayaaraha Taekwondowga Aduunka.